ODD 14 - Voahary an-drano - Tily eto Madagasikara
ODD 14 - Voahary an-drano
Ranomasina avokoa no mandrakotra ny roa ampahatelon’izao tontolo izao. Miankina be dia be amin’ny ranomasina ny fiainantsika olombelona : ahazoantsika sakafo, rano, angovo, … Ny fikolokoloantsika ny ranomasina sy ny zava-manan’aina ao aminy dia antoka hitsinjovantsika ny an-jato taona mbola hiainantsika sy ny taranatsika aoriana.
Tanjona 14 : Mitahiry sy mitrandraka ny ranomasimbe, ny ranomasina, ny
loharanonkarena an-dranomasina, am-pitsinjovana ny ampitso, ho
14.1 Mandrapahatongan’ny 2025, misoroka sy mampihena betsaka ny karazana loto an-dranomasina rehetra, indrindra ireo vokatry ny asa atao an-tanety, anisan’izany ny fako an-dranomasina sy ny loto avy amin’ireo akorantsakafo.
14.2 Mandrapahatongan’ny 2020, mitantana sy miaro maharitra ny rohivoahary an-dranomasina sy an-tsiraka, indrindra amin’ny fanamafisana ny fahafahana miatrika voina, hisorohana ny vokadratsin’ny fahasimbany. Maka fepetra hamerenana amin’ny laoniny izany rohivoahary izany mba hitsinjovana ny fahasalamana sy ny famokaran’ny ranomasimbe.
14.3 Mampihena faran’izay betsaka ny fahasidran’ny ranomasimbe, miady amin’ny vokany, indrindra amin’ny fanamafisana ny fiarahamiasa ara-tsiantifika isan’ambaratonga.
14.4 Mandrapahatongan’ny 2020, mametraka fitsipidalana mahomby momba ny jono, manafoana ny jono tafahoatra, ny halatra manjono, tsy misy fanambarana sy tsy manaraka fepetra, ny fomba fanjonoana manimba. Mampihatra drafipitantanana miorina amin’ny antontankevitra siantifika, tanjona ny hamerenana ny tahirin-trondro haingana araka izay azo atao, fara fahakeliny amina fetra hahafahana mahazo vokatra betsaka tsy tapaka araka ny toetoetra ara-biolojika.
14.5 Mandrapahatongan’ny 2020, miaro ny 10% ny fari-dranomasina sy ny sisintany fara fahakeliny, araka ny lalana eo amin’ny firenena sy ny lalana iraisam-pirenena sy araka ny antontankevitra siantifika tsara indrindra misy.
14.6 Mandrapahatongan’ny 2030, rarana ny tohana ara-bola ho an’ny jono izay mahatonga ny fihoaram-pefy amin’ny jono sy ny fanjonoana tafahoatra. Manafoana ny tohana ara-bola mahatonga halatra manjono, tsy misy fanambarana sy tsy manaraka fepetra, tsy manome tohana ara-bola vaovao. Ny fanomezana fikarakarana manokana sy isafidiana mahomby ary mifanaraka amin’ny firenena an-dalam-pandrosoana sy ny firenena tsy dia mandroso dia tokony ho tafiditra anaty fifanarahana momba ny tohana ara-bola ho an’ny jono atao eo amin’ny Vondrona iraisam-pirenena mikasika ny varotra.
14.7 Mandrapahatongan’ny 2030, omena tombotsoa kokoa amin’ny vokatra ara-toekaren’ny fitrandrahana maharitra ny loharanonkarena an-dranomasina ireo firenena nosy kely an-dalam-pandrosoana sy ireo firenena tsy dia mandroso, indrindra amin’ny alalan’ny fitantanana lovainjafy ny jono, ny fiompiana trondro sy ny fizahantany.
14.a Mandalina ny fahalalana ara-tsiantifika, manamafy ny fahafaha-mikaroka sy mampita ny teknikan-dranomasina araka ny fepetra sy fitsipika mitarika avy amin’ny vaomiera iraisam-pirenena misahana ny ranomasimbe momba ny fampitana ny teknikan-dranomasina. Tanjona ny fanatsarana ny fahasalaman’ny ranomasimbe. Manamafy ny anjarabirikin’ny zavaboahary anaty ranomasina amin’ny fampandrosoana ny firenena an-dalam-pandrosoana, indrindra fa ny firenena nosy kely an-dalam-pandrosoana sy ny firenena tsy dia mandroso.
14.b Miantoka ny fisitrahan’ireo mpanjono madinika ireo loharanonkarena an-dranomasina sy ny fidirana amin’ny tsena.
14.c Manatsara ny fikajiana ny ranomasimbe sy ny loharanonkarenany, mitrandraka azy amin’ny fomba maharitra araka ny fampiharana ny lalana iraisam-pirenena hita ao amin’ny fifanarahan’ny firenena mikambana momba ny lalana mifehy ny ranomasina, izay manome ny fitsipi-dalana ilaina iarovana sy itrandrahana maharitra ny ranomasimbe sy ny harena ao aminy, araka ny hita ao amin’ny andininy 158 mikasika ny « Hoavy ilaintsika »